Madaxweynaha Somaliland Siilaanyo oo dib ugu noqday Hargeysa kadib Safarkiisii Caafimaad ee Imaaraatka[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Somaliland Siilaanyo oo dib ugu noqday Hargeysa kadib Safarkiisii Caafimaad ee Imaaraatka[Sawirro]
HARGEYSA – Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo iyo Wafti uu hoggaaminayo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa kadib markii uu muddo laba todobaad ah arrimo Caafimaad ugu maqnaa dalka Isutaga Imaaraatka Carabta.
Madaxweynaha Somaliland ayaa garoonka diyaaradaha ,waxaa kusoo dhaweeyey Madax ka tirsan labada gole ee dowladda,wuxuuna salaan sharaf uu ka qaatay cutubyo kamid ah ciidamada Somaliland.
Afahayeenka Madaxtooyada Somaliland Xuseen Aadan Cige Deyr oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey safarkii Madaxweynuhu ku tegay dalka Imaaraadka Carabta iyo qaliin lagu sameeyey Madaxweynaha.
Waxaa dalka dib ugu soo noqday madaxweynaha somaliland oo a ka soo noqday safar uu ku joogay Magaalada Dubai, Madaxweynuhu waxa uu dalka baxay 18 /08/2017, waxaanu tagay Magaaada Abu-dubai, halkaasi oo ku galay qaliin fudud, waana lagu gulaystay qaliinkaas waanu caafimaad Qabaa, isagoo caafimadd qaba ayaanu ka soo daga garoonka diyaardaha Hargaysa” ayuu yiri Afhayeenka Madaxtooyadda.
Xuseen Aadan Cige Deyr ayaa sheegay in howlaha muhiimka ah ee horyaala Madaxweynaha ay tahay doorashada Somaliland ee soo socota sidii ay hab nabadgelyo ah ugu dhici lahayd,wuxuuna tilmaamay in Madaxweynuhu hore u saxiixay in doorashadu xiligeeda dhacdo.
Dhanka kale Afhayeenka ayaa ka jawaabay cabasho laga sheegay in laga qabo Guddiga doorashada Somaliland taasoo ka imaanaysa Xisbiyada mucaaradka.
Waxa uu sheegay in Madaxweynuhu ummada reer Somaliland uu dhex dhexaad u yahay balse aysan jirin sharci diidaya in uu taageero Xisbigiisa Kulmiye oo talada Somaliland haya.